October 2018 – Kalfadhi
Aqalka Sare Oo Meel Mariyay Hindise Sharciyeedka Kheyraadka Biyaha
October 31, 2018 November 1, 2018 Kalfadhi
29 ka mid ah 34 mudane oo ka tirsan Aqalka Sare oo ahayd tiradii soo xaadiratay kulankoodii 5-aad ee kalfadhiga afaraad ee maanta dhacay uuna guddoominaya guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ansixiyay Hindise Sharciyeedkii Kheyraadka Biyaha. Hindise Sharciyeedkan ayaana ag yaallay mudanayaasha Aqalka Sare 11-bilood. Waxaana maanta akhrinta 3-aad kla wadaagay Golaha Aqalka Sare Sanatar Ilyaas Cali Xasan. Saddex mudane kaliya ayaa ku sameeyay sixitaan dhanka hab qoraalka ah, mana jirin xildhibaan ka aamusay iyo mid diiday toona. Wasiir ku xigeenka wasaaradda tamarta, kheyraadka iyo biyaha Cismaan Libaax ayaa uga…
Golaha Shacabka Oo Mar Kale Ka Dooday Xeer-Hoosaadkooda
October 31, 2018 Kalfadhi
Xeer-hoosaadka Golaha Shacabka ayaa mar kale maanta looga dooday kulankii 20-aad ee kalfadhiga afaraad ee Golaha Shacabka. Mahad Cabdalla Cawad ayaa kulanka oo ay goobjoog ahaayeen 141 xildhibaan shir guddoominaayay. Qodobbada ay xildhibaannada ka doodeen ayaa waxaa ka mid ahaa ilaalada madaxda imaaneysa xarunta Golaha Shacabka iyo hubka ay wataan, sidoo kale qodob ka hadlaayay waqtiga ay qaadaneyso saxiixa madaxweynaha ee la xiriira hindise sharciyeedyada loo gudbiyo iyo waqtiga xukuumadda ku soo gudbin karto hindise sharciyeed. Xildhibaanada ayaa soo bandhigay talooyin iyo fikrado la xiriira qodobada ku jira xeer hoosaadka…
Xildhibaan Ciyaar Jecel: xildhibaannada qaar waxay kursiga xildhibaannimo ku ilaashadaan hantidooda
Xildhibaan Cabdi Shire Jaamac oo ka hadlayay kulankii 19-aad ee kalfadhiga afaraad ee Golaha Shacabka ayaa sheegay in xildhibaannada qaar aysan baarlamaanka usoo galin iney u adeegaan shacabka Soomaaliyeed, balse dantooda gaarka ah iyo hantidooda ku ilaashadaan. Waxa uu sheegay in saacadaha ay soo xaadiraan xildhibaannada iyo tirada timaadda aysan aheyn mid la aqabali karo. Halkaan ka daawo hadalka xildhibaanka Ciyaar jecel Xildhibaan Abdi Shire Jama oo sheegaya in xildhibaannada qaar ay kurisga ku ilaashadaan hanti ay leeyihiin, aysana soo xaadirin kulammada Golaha Shacabka. Posted by Kalfadhi on Wednesday, October…
Wasiir Cawad: Kenya Waxaan Kala Hadli Doonnaa Dhibaatada Ay Soomaaliya Ku Hayaan Ee Socdaalka Iyo Xad-gudubyada Kale Leh
October 30, 2018 Kalfadhi
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Amb Axmed Ciise Cawad oo ka hor tagay Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sameeyay hadal jeedin ku saabsan qorshaha wasaaradda, dhibaatooyinka heysta iyo miisaaniyaddeeda. Isaga oo jawaabayay su’aal uu Sanatar Yuusuf Geelle Ugaas weydiiyay wasiirka arrimaha dibadda kuna saabsanayd dhibaatada ciidamada Kenya ay ka geystaan gudaha Soomaaliya. Wasiirka ayaa sheegay in dhawaan ay ka wada hadli doonaan Kenya dhibaatooyin ay ka geystaan gudaha dalka iyo kuwa ka dhaca gudaha Kenya-ba. Halkaan ka daawo muuqaalka Yuusuf Geellle Ugaas Sanatar Yuusuf Geelle Ugaas oo weydiiyay wasiirka…
Sanatar Ilyaas: Walaac badan ayaan ka qabaa in amniga koonfur galbeed uu halis u galo doorashada darteed
Sanatar Ilyaas Cali Xasan oo ka mid ah xildhibaannada Aqalka Sare ee deegaan doorashadoodu tahay maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay xaaladda maamulka Koonfur Galbeed xilli ay doorasho kusoo wajahantahay. Hadal uu soo dhigay bartiisa facebook-ga ayaa ui dhignaa sidaan “ Waxaan aad uga walwalsanahay sida ay usocto diyaar garowga doorashada Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan dhanka amniga iyo Fara-gelinta” . Waxa uu sheegay in shacabka Koonfur Galbeed looga baahanyahay in ay ilaashadaan midnimadooda “ Waxaana xasuusinaayaa Shacabka KG taariikhihii madoobaa iyo dhibaatooyinkii u gaarka ahaa ee ay deegaannadaani…
Wasiirka arrimaha dibadda oo hor tagay Aqalka Sare
October 29, 2018 October 29, 2018 Kalfadhi
Guddomiyaha Aqalka Sare ee BFS Muddane Cabdi Xaashi Cabdullahi ayaa shir guddomyay Kalfadhiga 4-aad kulankiisa 4-aad. Waxaa Warbixin laga dhageeystay wasirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xukuumadda fedeeralka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Wasiirka ayaa si faahfafahsan uga warbixiyay muhiimadda ay u leedahay wasaaradda iyo meelaha ay howluhu hadda u marayaan. Wasiika ayaa ka warbixiyay wax qabadka wasaaradda , caqabadaha haysta iyo hishiiyada ay la galayaan dalalka caalamka Wasiirka ayaana sheegay in uusan waqti badan heyn, oo ma jirin su’aallo badan oo la weydiiyay, waxaana la ballamay kulanka kale.
Kulankii 19-Aad Ee Kalfadhiga Afaraad Oo Hadda U Socoda Xildhibaannada Golaha Shacabka
October 29, 2018 Kalfadhi
Waxaa goor dhawayd furmay kulanka 19-aad ee Golaha Shacabka BJFS. Kulanka Waxaa shir guddoominaya guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan, iyadoona uu goobjoog ka yahay guddoomiye ku xigeenka labaad ee Mahad Cabdalla Cawad. 140 Xildhibaan ayaa kulanka goobjoog ah, ajendaha kulan ayaa ah saddex qodob oo kala ah: 1. Codeyn ansixin horudhac ah wax ka badalka xeer hoosaadka golaha shacabka. 2. Qeybinta mashruuc sharci ku saabsan xuquuqda liil tirka siyaasiyiinta dowladda federaalka Soomaaliya. 3. Qeybinta aqrinta labaad ee hindise sharciyeedka hay’adda naafada Qaranka Soomaaliya. Xildhiaabannada ayaa qodob qodob loogu…
Maamul Goballeedyada Dalka ayaa ku jira xaalad adag oo kala guur ah duruufaha amniga, dhaqaalaha iyo maamulka jilicsan ayey u dheertahay khilaaf siyaasadeed iyo doorashooyin kusoo fool leh, waxaase ugu nasiib daran maamulka Galmudug oo shirkii Kismaayo kaddib yeeshay laba Madaxweyne, baarlamaan kala qeybsan, laba xukuumadood, laba caasimadood iyo laba urur diimeed. Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu yeeray reer Galmudug gogol-nabadeed dhawr jeer Xamar, isaga oo hormuud ka ahaa heshiiskii maamulka iyo ururka Ahlusunna, laakiin waxa ay ka door bideen shirkii Kismaayo iyo abaal-marintii Garowe! Waxaase is weydiin mudan: A: Maxaa…
Soomaaliya oo lagu dhiirran karo in la maalgashado waxay u baahan tahay in shaqo fiican laga sameeyo dhammaan kaabayaasha, farsamooyinka iyo qaaciddooyinka u noqon kara madal in loo babac dhigo maalgelinta dal kasoo kabanaya dagaalo sokeeye, argagixisanimo iyo dowlad la’aan eyey muujiyeen aragtiyo kala duwan, oo ay Kalfadhi la wadaageen dad falanqeeya arrimaha xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda dhaqaalaha, kaddib markii uu reysal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ku celceliyey iney Soomaaliya uga baahan tahay dalalka Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC) iney maalgashadaan Soomaaliya, markii uu uga furayey Muqdisho 27-kii bishan…
October 28, 2018 October 29, 2018 Kalfadhi
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa u raadinaya xal dhibaatada caafimaad ee ka jirta dalka. Golaha Shacabka ayaa gacanta ku haya Hindise Sharciyeed Gole Caafimaad loogu sameynayo Soomaaliya. Shalay ayaa mar Aqrintiisii Labaad loo horkeenay Golaha waxay Xildhibaanadu sheegeen inuu Sharcigani muhiim u yahay wanaajinta faya qabka caafimaadka Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya. Xildhibaan Haashim Nuur Aadan, oo ka aragti dhiibanayey Hindisahan, ayaa u sheegay Golaha iney Hindisaha ku jiraan waxyaabo badan oo laga maarmo, ayna ka maqan yihiin waxyaabo kale, oo muhiim u ah. “Diiwaan-geliyaha Caafimaafdka waa inuu diiwaan-geliyaa xarunta caafimaad ayaa ku qoran…